KATHMANDUTemperature 19°CAir Quality179
स्रोतको अथाह भण्डार हुँदाहुँदै पनि ५१.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमै
कर्णालीको मुख्य चाड पुसे भैली मनाउँदै स्थानीय राजबहादुर शाही
कर्णाली भन्‍ने बित्तिकै अधिकांश नेपालीको मनमस्तिष्‍कमा एउटै चित्र कोरिन्छ– पिछडिएको, गरिब र विकट हिमाली क्षेत्र । यहाँका बासिन्दाका लागि केही दशक अघिसम्म सहज रूपले नुन खान पाउनु पनि खुसीको क्षण हुन्थ्यो । राज्यसँगको सम्बन्ध र पहुँच त कर्णालीबासीका लागि धेरै टाढाको कुरा थियो ।
बदलिँदो समयसँगै कर्णालीबासीको आत्मबल ह्‍वात्तै बढेको छ । यो प्रदेशले आफ्नो न्वारान र राजधानी सबभन्दा पहिले टुंग्याएर अन्य प्रदेशलाई उत्प्रेरित पनि गर्‍यो । पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग सजिलै नदबेका कर्णालीबासी आफ्नो त्यही बहादुरीका कारण केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई सधैँ साधन–स्रोत र अवसरबाट वञ्‍चित गराएको दुखेसो गर्छन् । यो दुखेसो र प्रतिशोध प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि झल्किन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको भूमिकामा नै लेखिएको छ, ‘नेपाल एकीकरणको अभियानमा कर्णालीका राज्यहरू अन्तिमसम्म लडिरहे, जसका कारण काठमाडौँ त्यसैबेलादेखि नकारात्‍मक रह्यो र कर्णालीले पनि केन्द्रलाई कहिल्यै आफ्‍नाे ठानेन । अब कर्णालीले पनि आफ्नो धारणा बदल्ने र केन्द्र सरकारको धारणा बदल्न सघन संवाद र सहकार्य गरिनेछ ।’
कर्णालीको एउटा दाबी रहेछ, लामो समयसम्म स्रोत–साधन नदिएर पछाडि पारिएको थलोलाई अब केन्द्र सरकारले विगतको क्षतिपूर्तिसहित यहाँको जनजीवन उकास्‍न उल्लेख्य स्रोतको विनियोजन गर्नुपर्छ । कर्णालीबासी अथाह स्रोत भए पनि कस्तुरीले बिनाको खोजी गरेजस्तो वर्षौं भौँतारिनु परेकामा दु:खित छन् । तर अब आफूसँगको बिनाको पहिचान भइसकेकाले त्यसको भरपुर उपयोग गरेर कर्णालीको मुहार पाँचै वर्षमा बदल्ने प्रयासमा प्रदेशका संयन्त्र लागेका छन् ।
कतिपयले कर्णालीलाई ‘सुनको सिरानी लगाएर नुनको खोजी गर्ने’ प्रदेशको रूपमा पनि चिनाउन खोज्छन् । अर्थात्, यहाँ स्रोतको अथाह भण्डार छ तर त्यसको पहिचान र प्रयोग हुन नसक्दा मान्छे गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । पाँचै वर्षमा कर्णालीबासीको मुहार फेर्ने लक्ष्य राखेर यहाँको प्रदेश योजना आयोगले पञ्‍चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारको यो उत्साहलाई स्थानीय तहले पनि साथ दिएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नै कार्यकालमा पालिकाको मुहार फेर्न सकियोस् भन्‍ने हुटहुटीमा देखिन्छन् । सञ्‍चार माध्यम र हल्लामा आएजस्तो कर्णालीका स्थानीय सरकारले कामै नगरेका भने होइनन् । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा परिणत भएपछिको पहिलो कार्यकाल भएकाले जानी नजानी पाइला चाल्नुपर्दा कहीँ–कतै कमजोरी भएको तर अपवादबाहेकनियत राखेर कसैले पनि गलत नगरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिका लागि खास स्रोतको पहिचान गरेको छ । त्यसका लागि उसले नारा नै बनाएको छ– ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्रा धन ।’ समग्र नेपालको औसतभन्दा झन्डै दोब्बर रहेको यहाँको बहुआयामिक गरिबीलाई घटाउनु प्रदेशका लागि चुनौती छ । यहाँका हरेक दुईमा एक जना गरिब छन् । अर्थात्,५१.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीबाट पीडित छन् ।
१० माघमा भएको प्रदेश विकास परिषद‍्‌काे दोस्रो बैठकले दुई वर्षभित्र कर्णालीको गरिबीलाई आधा घटाउने दाबी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी भन्छन्, “विकासको मूलधारमा समाहित हुन वा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अरू प्रदेशले हिँड्दा हुन्छ भने कर्णालीले दौडनुपर्छ । दौडेरै लक्ष्य हासिलगर्ने योजनामा छौँ ।”
रेग्मीका अनुसार कर्णालीले विकासको मूलधार पछ्याउन र सुखारी कर्णालीको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनेतिर सरकार लाग्‍नुपर्छ । हालसम्म २ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अवस्थामा सुधार नहुने हो भने सुखारी कर्णालीबासीको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले सबै प्रदेशभन्दा ठूलो र अधिकांश सूचकमा सबभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली राष्ट्रिय सूचकलाई भेट्न कसरी दौडिएला ? यस्तो महत्त्वाकांक्षी उपलब्धि कसरी हासिल होला ? कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशले हरेक योजना अनुमानमा नभई तथ्यांकमा आधारित भएर बनाउने, त्यसैअनुसार उपलब्धिको मूल्यांकन पनि तथ्यांकमै मापन गरिने बताउँछन् । भन्छन्, “मैले करिब दुई वर्षको अवधिमा हेरेँ– कर्णालीमा धेरै योजना किन ल्याइए, किन कार्यान्वयन गरिए, त्यसबाट कसलाई, के लाभ भयो । त्यसको कुनै तथ्य आधार देखिनँ । त्यस कारण अब कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा जोड्ने सुरमा छु । त्यसैअनुसार हामीले कर्णालीको आधारभूत तथ्यांक पनि अद्यावधिक गरेका छौँ ।”
कर्णाली सञ्‍चार माध्यममा देखिएजस्तो बिरूप र गरिब नभएकाले यहाँको जनजीवनलाई उकास्‍न सम्भव भएको तर्क जनप्रतिनिधिको छ । राजधानीका मिडियाले कहिले कर्णालीबासीले नुन खान पाएनन् भनेर लेखे, कहिले भोकमरीले मान्छे मरे भनेर लेखिदिए । यसैअनुसार मानिसले कर्णालीबारे धारणा बनाए ।
अर्कातिर गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना परियोजना सञ्‍चालन गर्न कर्णालीको विद्रूप रूप प्रस्तुत गरे । उनीहरूले अनुसन्धान त गरे तर आफू अनुकूल हुने गरी प्रतिवदेन बनाउन । “काठमाडौँ बसेर कर्णालीको अनुमानकारिता गर्ने सञ्‍चार माध्‍यम र प्रोजेक्ट पर्ने गरी अनुसन्धान रिपोर्ट बनाउने एनजीओका कारण कर्णालीबासी सबैभन्दा दु:खी र पिछडिएका देखिएका हुन्,” मुगु जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्णबहादुर रोकाया थप्छन् “त्यति धेरै पिछडिएका, अबुझ र गरिब छैनाैँ, जति कर्णालीबाहिरकाले हामीलाई बुझेका छन् । सुखारी कर्णालीको लक्ष्य हासिल गर्न हामी सक्षम छौँ ।”
सडक, सूचना सञ्‍जाललगायतले कर्णालीको परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँदै छ । कर्णालीको स्याउ र जुम्लाको मार्सी धानले बजार पाउन थाल्नुको कारण पनि यही हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रणाली बसालिदिए जनता आफैँ सुखारीको यात्रामा अग्रसर हुने विश्‍वास कर्णालीबासीको छ ।
नेपालको कुन क्षेत्र कोरोनाको रेड जोन ? विदेशबाट कति आए ? स्वास्थ्यकर्मीका लागि कति छ पीपीई...
रेड जोनमा सुदूरपश्चिम, प्रदेश ५ र २, कोरोना भाइरसविरुद्ध बन्दोबस्तीका १० तथ्य #NepalMag #Explainer
देशमा सङ्क्रमणको पहिलो केस पहिचान भएदेखि यता तपाई हाम्रो साझा प्रयत्नले संक्रमितहरूको संख्...
"कोरोना संकट देखाएर प्रधानमन्त्रीले जीवन या स्वतन्त्रतामध्ये एक रोज्‍न चुनौती दिनुभयो-- त्...